Rapido - India’s Largest Bike App 4.7.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.7.2 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Rapido - India’s Largest Bike App
Rapido - India’s Largest Bike App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Rapido, အိန္ဒိယရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဆိုင်ကယ် App ကို အမြန်ဆုံးနှင့်နေ့စဉ်ခရီးသွားများအတွက်အများဆုံးတတ်နိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Rapido ဆိုင်ကယ် app ကိုအိန္ဒိယတွင် 40 မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သန်း2ကိုကျော်ပျော်ရွှင်ဖောက်သည်များနှင့် 10+ ဒီ app အပေါ် Millionrides နှင့်အတူ, Rapido ဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်မြို့ခရီးသွားပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်တတ်နိုင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းမှာနောက်ဆုံး-မိုင်ဆက်သွယ်မှုများပေးနေပါသည်။ 1 ကိုကျော်သိန်း Captain (ယာဉ်မောင်း) ထားရှိခြင်း, ဒီစက်ဘီးဘွတ်ကင် app ကိုအသွားအလာနှင့် ပို. ချွေသည်အခြားတက္ကစီဘွတ်ကင် apps များထက်အခြားယာဉ်များမှတဆင့်ကူးရန်လွယ်ကူနေသောစက်ဘီးပေါ်တွင်အစာရှောင်ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါသည်။
အဆိုပါ Rapido ဆိုင်ကယ် App ကိုယခု Download နှငျ့သငျစီတန်းအတွက်ဘတ်စ်ကားစောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်အခြားတက္ကစီဘွတ်ကင် apps များ၏ကြန်အင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ တစ်မြန်, ထိရောက်, ချွေတာခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစက်ဘီး app ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။
Rapido ဆိုင်ကယ် app ကိုလည်းလမ်းများပေါ်တွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချအတွက်ဆာသည်နှင့်တစ်ကိုယ်တော်အသွားအလာအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခရီးသွား option ကိုပေးပါသည်။ ရှေ့ဆက်သည်အခြားတက္ကစီဘွတ်ကင် apps များ, Rapido ဝေးနေဖြင့်အိန္ဒိယလမ်းများများအတွက် app ကို booking ၏အထိရောက်ဆုံးကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးသိသာရရှိနိုင်အခြားအွန်လိုင်းဘွတ်ကင် options များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နေ့စဉ်ခရီးသွားတစ်အများကြီးတတ်နိုင်နှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ option ကိုဖြစ်ကြသည်။
Rapido ဆိုင်ကယ် App ကို၏အဓိကသော့ချက်များ -
* ကြပါစေယင်း App ကို - Rapido တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်အဆင်ပြေအတွေ့အကြုံအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လောလောဆယ် app ကိုအင်္ဂလိပ်, ဟိန္ဒူ, တမီး, ဂုနှင့်ကန်နာဒါအတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ OTP တစ်ဦးဆိုင်ကယ် app ကိုဘွတ်ကင်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမစောင့်ဆိုင်း - * ဝင်မည် One-ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အသုံးပြုသူချောမွေ့စွာ onboard အဘို့, Rapido သူတို့ကိုခဏအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်သော Truecaller ကနေတဆင့်တဦးတည်း-click နှိပ်ပြီးရဲ့ login ကိုအသုံးပြုသည်
ပိုမိုလွယ်ကူ access များအတွက်အနှစ်သက်ဆုံးအဖြစ် * မကြာခဏ Save သွားရောက်ခဲ့ပြီးနေရာများ
စီး၏ Real-time တည်နေရာ * တိုက်ရိုက်ခြေရာခံခြင်း
အာမခံလုပ်ငန်းများ၏နှင့်ကို Safe စီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ခြင်းဖောက်သည်များ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး, ငါတို့ရှိသမျှသည်အသုံးပြုသူ protected ကြောင်းအာမခံပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် Rapido စီးနင်းမျှအပိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက် Reliance အာမခံနှင့်အတူအာမခံထားသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တစ်ဦးထုပ်နှင့်တစ်ခါသုံးဦးထုပ်များကိုပေးစွမ်းဒါကြောင့်သင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘဲလုံခြုံစိတ်ချစွာဆိုင်ကယ် app ကိုစီးနင်းခံစားနိုင်။
လွယ်ကူအွန်လိုင်းဘွတ်ကင် app ကို
Rapido ဆိုင်ကယ် App ကိုအပေါ်တစ်ဦးစီးနင်း booking ရုံမဆိုအခြားအွန်လိုင်းဘွတ်ကင် app ကိုထက်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ Android နဲ့ Apple ကပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ applications များနှင့်အတူသင်အမြဲသင့်ရဲ့သွားလာရင်းမှ app အဖြစ် Rapido ရှိလိမ့်မည်!
* ပွင့်လင်း Rapido ဆိုင်ကယ် App ကို
* အဆိုပါ App ကိုသငျသညျလညျးအကို manually ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်ဂျီပီအက်စ်မှတဆင့်သင့်ရဲ့ပစ်ကပ်တည်နေရာရွေး
* destination သည်တည်နေရာရိုက်ထည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းမြေပုံပေါ်တွင်တစ်ဦး pin ကို drop နိုင်ပါတယ်
* အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်ကိုအတည်ပြုရန်ရှေ့နှင့်တောင်းဆိုမှု Rapido Go
သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရန်သင့်အားခေါ်ထုတ်နောက်ခံ, မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိ Captain နှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံမှုသင့်အကြောင်းစိုးရိမ်သင့်ပါတယ်ပြီးခဲ့သည့်အရာဖြစ်သင့်သည်။
ချောမွေ့စွာဆိုင်ကယ်ဘွတ်ကင်အတှေ့အကွုံ Making, Rapido ငွေကနေတဆင့်ပေးဆောင်ဖို့ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူလွယ်ကူသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များရှိပြီးသို့မဟုတ်ပင်ထိုကဲ့သို့သော Paytm, Freecharge, Mobikwik နှင့် Rapido ပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်သွားကြဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Rapido လည်း LazyPay နှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ပေးဆောင်ဖို့ငွေပေးချေမှု option ကိုရှိပါတယ်။
Rapido မှာသစ်ကိုဖွင့်ရာနှငျ့ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာပါ။
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://twitter.com/rapidobikeapp
https://www.facebook.com/rapido4bike: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://www.instagram.com/rapidoapp
မေးခွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသလား? shoutout@rapido.bike မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိတွေ့ Get
Rapido - India’s Largest Bike App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Rapido - India’s Largest Bike App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Rapido - India’s Largest Bike App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Rapido - India’s Largest Bike App အား အခ်က္ျပပါ
mipicks-store စတိုး 16.55k 177.22M
Rapido - India’s Largest Bike App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Rapido - India’s Largest Bike App အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://rapido.bike/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: DA:94:FC:D2:3D:48:32:7F:6C:18:20:83:CE:78:AD:5A:C4:30:CD:65
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rapido passenger
Rapido - India’s Largest Bike App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ